Ukuhlanza Amakhontrakthi eMelbourne, eVictoria
Uhlu Lwezakhiwo: Isiqondisi sebhizinisi Ukuhlanza Amakhontrakthi Victoria Melbourne
IMelbourne ((lalela) iMEL-b -rn) iyidolobha elikhulu nedolobha elinabantu abaningi esifundazweni sase-Australia iVictoria, nedolobha lesibili elinabantu abaningi e-Australia nase-Oceania. Igama laso libhekisa kwi-agglomeration yasemadolobheni ye-9,992.5 km2 (3,858.1 sq mi), enendawo yasedolobheni elikhulu nomasipala be31, futhi okuyigama elivamile lesikhungo sasedolobheni. Idolobha lithatha ingxenye enkulu yogu lwePort Phillip bay bese lisakazeka ezindaweni eziqonde emabangeni aseDandenong naseMacedon, eMornington peninsula naseYarra Valley. Inesibalo sabantu abacishe babe yizigidi ezingama-5 (ama-19% wabantu base-Australia), futhi izakhamuzi zakhona zibizwa ngokuthi "ngamaMelburnians" .Idolobha lakhiwa nge-30 Agasti 1835, koloni-lwaseBrithani laseNew South Wales ngaleso sikhathi. izifiki ezikhululekile ezivela koloni lweVan Diemen's Land (iTasmania yanamuhla). Ifakwe njengendawo yokuhlala yaseCrown e1837 futhi yaqanjwa ngokuhlonipha uNdunankulu waseBrithani, uWilliam Lamb, i-2nd Viscount Melbourne. E-1851, eminyakeni emine ngemuva kokuba iNdlovukazi uVictoria imemezele ukuthi iyidolobha, iMelbourne yaba inhloko-dolobha yekoloni elisha laseVictoria. Ekuvukeni kwe-1850s yeVictorian yegolide, leli dolobha langena isikhathi eside sokuthi, ngama-1880s asemuva kwesikhathi, aseliguqule laba elinye lamadolobha amakhulu futhi acebile emhlabeni. Ngemuva komfelandawonye wezwe lase-Australia e1901, lisebenze njengesihlalo sesikhashana sikahulumeni walesizwe esisha waze iCanberra yaba inhlokodolobha yaphakade e1927. Namuhla, siyisikhungo esihola phambili sezezimali esifundeni sase-Asia-Pacific futhi sifaka i-15th eGlobal Financial Centers Index.Idolobha leli linezikhungo eziningi zamasiko ezaziwa kakhulu ezweni, njengeMelbourne Cricket Ground, iNational National Igalari yaseVictoria neRoyal Heritage Exhibition Building. Futhi kuyindawo yokuzalwa kwe-Australia, i-Australia ibusa ibhola lezinyawo, izimboni zefilimu nezethelevishini zase-Australia nomdanso wesimanje wase-Australia. Muva nje, kuye kwahlonzwa njenge-UNESCO City of Literature kanye nesikhungo somhlaba wonke kwezobuciko basemgwaqweni, umculo obukhoma nomdlalo weshashalazi. Yidolobha eliyisingatha lemicimbi yaminyaka yonke yamazwe afana ne-Australia Grand Prix, i-Australia Open ne-Melbourne Cup, futhi ibambe futhi i-1956 Summer Olimpiki kanye ne-2006 Commonwealth Games. Ngenxa yokuthi lilinganisa kakhulu kwezokuzijabulisa, ezokuvakasha nezemidlalo, kanye nemfundo, ukunakekelwa kwempilo, ucwaningo nentuthuko, i-EIU njengamanje iyisikhundla sedolobha lesibili kunazo zonke emhlabeni.Isikhumulo sezindiza esikhulu esisebenzela idolobha yiMelbourne Airport (nayo ebizwa ngokuthi yi-Melbourne Airport) kuya ku-Tullamarine Airport), okuyindawo yesibili ebabazekayo e-Australia, kanye netheku lase-Australia elixakeke kakhulu ePort of Melbourne. Isiteshi sayo esikhulu sesitimela esikhulu isiteshi saseFlinders Street kanti isiteshi esikhulu somqeqeshi wesitimela kanye nomqeqeshi wasemgwaqweni yisiteshi saseSouthern Cross. Ibuye ibe nenethiwekhi ebanzi kunazo zonke zomgwaqo onguthelawayeka e-Australia kanye nenethiwekhi enkulu yedolobha yama-tram emhlabeni.